Monologues Dheddig Noocyada "Bad" Nooca Hooyo
Monologs Hooyo Hooyo
Caadi ahaan, hooyooyinka waxaa lagu soo bandhigaa shaqsiyaadka kobcaya kuwaas oo jecel carruurtooda shuruud la'aan. Si kastaba ha ahaatee, riwaayado badan ayaa doortay inay hooyooyinka u muujiyaan inay yihiin kuwo caqli-gal ah, caqli-gal ah, ama dareen diidmo ah.
Halkan waxaa ku qoran jumlado ka mid ah monologs ka soo ugu weyn ee Moms taariikhda marxaladda:
Amanda Wingfield oo ka timid "The Glass Menagerie" by Tennessee Williams
Amanda Wingfield, oo ah xayawaan koonfurta ah iyo hooyada si joogta ah u jecel, waxay doonaysaa inay ugu fiican tahay carruurteeda. Hase yeeshee, waxay aad u dhib badan tahay wiilkeeda Tom, dhagaystayaashu waxay fahmi karaan sababta uu u doonayo inuu guriga uga baxo si wanaagsan.
Iska hubi wada sheekaysigeeda caadiga ah ee cuna qabateynta ah ...
Volumnia oo ka socota "Coriolanus" by William Shakespeare
Coriolanus waa dagaal yari aad u xoogan, nin aad u kalsooni badan oo geesinimo leh oo uu hoggaamiyo oo ka soo horjeeda magaalada hore ee magaalada Rome. Muwaadiniinta - xitaa xaaskiisa - waxay ka codsadeen inuu joojiyo weerarka, laakiin wuu diidaa in uu ka aamuso. Waxa uu noqon lahaa geesinimo ficil ah haddii uusan ahayn wiilka Mama.
Muuqaalkaan, hooyada, Voliolia, ayaa u sheegtay wiilkeeda inay joojiso weerarka. Akhri buuggan xooggan ee ku kalsoon Shakespearean.
Mama Rose "Gypsy" (Lyrics by Stephen Sondheim)
Heerka ugu dambeysa ee waalidku, Rose waxay udireysaa caruurteeda nolol xumo ku jirta ganacsiga. Markay taasi dhacdo, waxay ku boorinayaa gabadheeda in ay noqoto xeelad caan ah: Gypsy Rose Lee.
Xitaa ka dib guusha gabadha ee xirfadda burcadnimada, Mama Rose waxay dareentaa inaysan ku qanacsanayn. Waxay muujineysaa ulajeeddadeeda dhabta ah iyada oo loo marayo gabay ...
Nora Helmer oo ka tirsan aqalka "A Doll's House" by Henrik Ibsen
Hadda, waxaa laga yaabaa inaanay caddaalad ahayn in Mrs. Helmer liiska lagu qoro. Diidmada khilaafka ee Ibsen, Nora waxay ka tagtaa ninkeeda sababtoo ah ma jecla ama fahamkeeda. Waxay sidoo kale go'aansataa in ay caruurteeda ka tagto, ficil ay keento muran badan.
Go'aankeedii ahaa in ilmaheeda ay ka baxdo maaha oo keliya inay ka xanaajiso xubnihii dhagaystayaasha ee qarnigii 19aad, laakiin sidoo kale akhristayaasha casriga ah. Akhri Nora ee khudbadda iyo garsoorahaaga naftaada. More »
Boqorka Gertrude "Hamlet" by William Shakespeare
Wax yar ka dib dhimashadii shakiga lahaa ee ninkeeda Gertrude wuxuu guursanayaa walaalkaa soddogga ah! Kadib, markii Hamlet ay u sheegeyso in aabihiis la dilay, haddana waxay la joogtaa ninkeeda. Waxay sheegtaa in wiilkeedu uu duurjoog ah la dhaco.
Akhri Gertrude's monolog oo ka socda musiibada ugu caansan Shakespeare.
Mr Warren oo ka socda "Warren's Profession" Mr Shaw
Marka ugu horeysa qarniga 19-aad ee cayaartu waxay u egtahay mid fudud, xitaa riwaayad witty ah oo u dhaxeysa gabadh wanaagsan oo uur leh iyo hooyadeed.
Kadibna waxaa soo baxday in hooyada, Mr Warren, ay taajir ka dhigtay adoo maareynaya dhowr maroodi oo London ah. U akhri sheeko udubdhexaad ah.
Madame Arkadina oo ka soo jeeda "The Seagull" by Anton Chekhov
Waxaa laga yaabaa in jilayaasha ugu caansan ee ay sameeyeen Anton Chekhov, Madame Arkadina waa hooyo aan caqli gal ahayn oo diidday in ay taageerto ninkeeda. Waxay ku tilmaantaa shaqadeeda, waxayna ku adkaataa wiilkeeda guusha.
Muuqaalkan, waxay kaliya fiirisay qeyb ka mid ah ciyaaraheeda 24-jirka ah ee wiilkeeda. Si kastaba ha noqotee, wax soo saarka ayaa la joojiyay sababtoo ah way sii wadi jirtay.
Queen Jocasta oo ka socota "Oedipus Rex" by Sophocles
Maxaan ka sheegi karnaa jaceylka boqoradda? Waxay wiilkeeda ka tagtay in ay ku dhinto cidlada, iyada oo rumaysan in ay ka badbaadin lahaa iyada wax ka sii buuqsan. Dheecaan, Bisada Oedipus way ka badbaaday, koray, oo aanad guursan hooyadiis. Anigu waxaan sharxayaa arimuhu inay ku qoslaan marka ay yimaadaan qoysaska.
Akhri jadwalkan (iyo Freudian-ka). More »
Medea oo ka timid "Medea" by Euripides
Mid ka mid ah jihaadka ugu sareeya ee ku yaalla dhammaan Mitolojiga Giriigga, Medea waxa ay raadinayaan aargoosiga geesinimada, laakiin weli Jason (aabaheed caruurteeda) ayaa diley iyada oo ay dishay carruurteedii.
Iskuday suurtagalnimada kan ugu xun ee muuqda. More »
Monologs-ka ugu wanaagsan ee "Hamlet"
Jocasta's Monologue "Oedipus King"
Baro Sharciga Beatrix Labo Maabaadi oo ka socda "Promed"
"Santa 'Jawaabtii" - Muuqaal-Maqal Miisaaniyadeed Miisaaniyadeed
Veronica from "Faarfinta Firaaqada Firinjiga"
Monologue Coaster Monaster
Beatrix's Monologue Monologue ka soo "Promedy"
Cassandra's Rant - Cudurka Dabeecadda Dhallaanka ah
Kombuyuutar Dhibaato ah oo ka socda "CSI: Neverland"
Sawirada Nora ee "Guriga Doll ee"
Cyrano de Bergerac's Cudurka Comedic Nose
Waxyaabaha u Dhigaya Barashada Dhibaatooyinka iyo Dhibaatada
Miisaaniyadda Taariikhda Miisaaniyadda ee Madaxweynaha
Dib-u-eegis yar yar ee Chainsaw
Master Neefsashada 7 Waxyaabaha Hagahan ah
Maxay tahay xawaaraha Fikradaha?
Sidee Mucjiso Haniel ugu qaadataa Enoch Jannada?
Imtixaanada Sayniska Dugsiga Sare
Jadwalka Heerarka SAT - Isbarbardhig Macluumaadka Aqbalaadda ee Kulliyadaha kala duwan
Martin Luther King Jr. Qoritaanka Qorista
Path Pathway ee loogu talagalay Madaxa Maareynta
Mucjisada Maryan ee Muusikada iyo Mucjisooyinka Beauraing, Belgium
Maxay tahay Heshiiska Guud ee Taraafiyada iyo Ganacsiga (GATT)?
Xagga sare ee Sheekooyinka iyo Madadaalada
Calaamadaha Calaamadaha Guurka ee Fikradda ah
Ragcado caan ah: LS Lowry
Iskuulada Indiana Colages
Addoonsiga casriga ah: Dadka iibka ah
Qaab dhismeedka Golfer Lorenzo Ochoa
PowerPlay Golf: Nooca Cusub ee Ballanqaadka Weynaanta Wanaagsan ee Wakhti Yar
20ka Farshaxan ee ugu wanaagsan Afrikaanka Ameerikaanka ah
Shanta Shanaad ee Wanaagsan ee Wanaagsan-Man ee Kitaabka ah si loo Caqli-galo Akhriyaha Cusub
Markii Ganga uu dhashay
10ka Buuxa ee ugu wanaagsan 10-ka Yuuroow
Muxuu yahay Aasaas?
Kacsanaanta iyo Kacsanaanta Jacaylka